Uvavanyo lwetshaja yeXiaomi 10W MAX | Ixabiso kunye neempawu | I-Androidsis
Kule veki kuye kwafuneka sizame Imveliso yeXiaomi, kwaye ihlala inyango. Njengoko sisazi, inkampani yaseTshayina idume ngokuvelisa izixhobo ezisemgangathweni. Kwaye ngeli xesha sibeke Ishaja engenacingo yeXiaomi 10W MAX. Itshaja ekukudala ilindelwe engenazingcingo ezisa into entsha.
Itshaja ezingenazingcingo zeza kwintengiso ngeentloni. Ngokukodwa kuba zazimbalwa ii-smartphones ezixhotyiswe ngetekhnoloji ukuze zikwazi ukuzisebenzisa. Ngoku siyabona ngakumbi nangakumbi iifowuni ezihambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Yiyo loo nto ezi mveliso ziye zajika zaza zazenza. Kwaye ke, iXiaomi ayinakuba ngaphantsi.
Ngaba ufuna itshaja ekhawulezayo engenazingcingo ngesona saphulelo silungileyo? Ewe, cofa apha uze uyithengele i-19,99 kuphela usebenzisa ikhowudi SP0054. Kwaye kubandakanya iindleko zokuhambisa simahla! Sisibonelelo esisebenza kude kube ngu-Novemba 30, 2018.
1 Xiaomi 10W MAX itshaja ekhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi engenazingcingo
2 Injani itshaja yeXiaomi 10W MAX?
3 IXiaomi 10W MAX ikhuselekile
4 Isongezelelo esenza ibengcono kunabanye
5 Iinkonzo kunye neengozi zeXiaomi 10W MAX engenantambo kwtshaja
Xiaomi 10W MAX itshaja ekhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi engenazingcingo
Okwangoku sineendidi ezahlukeneyo ngokwejubane lokulayisha ngaphandle kwamacingo. Ayizizo zonke iitshaja ezifanelekileyo kuzo zonke ii-smartphones. Kwaye ayizizo zonke ii-smartphones ezinokuhlawuliswa ngayo nayiphi na itshaja. Into esinethemba lokuba ekuhambeni kwexesha iya kudityaniswa ngokupheleleyo ukuze kube lula ukufumana itshaja elungileyo.
Iitheminali zokuqala ezinokutshaja ngaphandle kwamacingo okufika kwintengiso zifikelela kwi-5 watts. Nazi ezinye iitheminali ezikhoyo ngoku esele inento ebizwa ngokuba kukutshaja ngokukhawuleza ngaphandle kwamacingo, apho ifikelela kwi-7,5 wattss. Ewe kunjalo, ukukhutshwa kwamva nje kulo nyaka sele benayo Ukutshaja nge-10 watt ngaphandle kwamacingo.
UXiaomi uhlaziye uluhlu lweshaja ezingenazingcingo ngale intsha I-10W MAX. Kwaye inikezela ngesixhobo iyahambelana neemodeli zamva nje Ukusuka kwimarike. Ngetshaja ye-10 watt kunokwenzeka ukuba ubize, umzekelo, iimodeli zamva nje zeSamsung, ezinje nge i-S9 okanye iNqaku 9. Ngale tshaja ngaphandle kwamacingo awuyi kubamfutshane nangaliphi na ixesha kwaye ngoku inokuba yeyakho engaphantsi kwe- $ 15.
Ukuthenga itshaja ngexabiso elifanelekileyo khumbula ukuba kufuneka ngena apha y sebenzisa ikhowudi yonyuselo SP0054 eya kufumaneka kude kube ngu-Novemba 30, 2018.
Injani itshaja yeXiaomi 10W MAX?
Kuncinci esinokukuthetha ngokwasemzimbeni malunga neshaja encinci engenazingcingo. Akukho nto ingako unokuyixela ngaphaya kombala, izixhobo zokwakha kunye nezihlanganisi ezinazo. yayo Inxalenye ephezulu yenziwe nge-silicone engatyibiliki ngesiphelo esimnandi kakhulu ngaphandle kwebala. Embindini, umfuziselo weMi uphakamile, ngokungathandabuzekiyo uyafana nomgangatho. Kwi ezantsi encontramos Isinyithi siphathwe ngetoni emnyama eblowu oko kuyinika umnqweno onomdla kakhulu. Isinyithi uphumle kwisangqa seerabha ukuze inkxaso yayo izinzile kwaye ingatyibiliki.
Ngaphambili inonobumba omncinci ukukhanya okuluhlaza okukhokelwayo esixelela xa ixhunyiwe kwaye isebenza. Kwaye kweyakhe ngasemva siyifumene Isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB ukuyiqhagamshela kwimayins. Isixhobo esilula ekungakhange kubonakale nto kuso kodwa sinika ukugqitywa okugqwesileyo kunye nembonakalo entle enomtsalane.
IXiaomi 10W MAX ikhuselekile
IXiaomi 10W MAX Ishaja engenazingcingo yitshaja ekhuselekileyo. Asifanele soyike kuba inokubangela naluphi na uhlobo lwesiganeko. Kwi-Xiaomi, ngononophelo, baxhotyiswe ngesi sixhobo ngayo yonke into eyimfuneko ukwenza oko. UMthetho oYilwayo ngensimbi yokhuseleko lwento yangaphandle, Ke ukuba ifumana ingqekembe, okanye isitshixo, enokubangela isiphaluka esifutshane icima ngokwayo.
Kwakhona izakucima ngokuzenzekelayo ukuba ibhaqa ukunyuka kweqondo lobushushu oko kungaphandle kokucetyiswayo. Ukuba ukufudumeza kubangelwa kwitshaja ngokwayo, inkqubo yakho lawula inqanaba kunye namandla okutshaja ukubuyisa iqondo lobushushu kwinqanaba elifanelekileyo. Ke, yonke into iya kuba phantsi kolawulo kwimeko yokutshisa kakhulu isixhobo okanye itshaja.
Isongezelelo esenza ibengcono kunabanye
Enye yeengxaki zokukwazi ukutshaja ifowuni ngetshaja engenazingcingo kukuba ifowuni ngokwayo kufuneka inxibelelane nalowo uhlawulisiweyo. Ke, Ukuza kuthi ga ngoku bekufuneka sisuse ityala okanye izindlu ze-smartphone ukuze sikwazi ukuyihlawulisa. Into eyaba yingxaki yokwenyani kuba kwakufuneka siyenze yonke imihla.
Kulungile oku akusayi kubakho mfuneko ngetshaja entsha ye-Xiaomi engenazingcingo. Enye yezona zinto zongezelelekileyo zilindelweyo le tshaja ibiyenye yezona zinto zibalulekileyo kubasebenzisi ukusukela oko bangena kwimarike. Ekugqibeleni singabiza iifowuni zethu iyahambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo ngesembozo.
Itshaja IXiaomi 10W MAX ivumela ukutshaja ngaphandle kwamacingo ukuya kuthi ga kumgama we-4mm. Oko kukuthi, nangayiphi na imeko okanye iqokobhe kwintengiso. Ngaphandle kwamathandabuzo inkqubela phambili ebalulekileyo eyenza ukuba iithaja ezingenazingcingo zikhululeke njengoko kufanele ukuba zibekho kwasekuqaleni. Apha ungathenga iXiaomi 1oW MAX ngexabiso elifanelekileyo.
Iinkonzo kunye neengozi zeXiaomi 10W MAX engenantambo kwtshaja
Los izinto zokwakha Zibonakala zilungile, i-silicone engatyibilikiyo ngaphezulu, kunye nesinyithi esimnyama emazantsi. Ngokuqinisekileyo enye ukhetho olufanelekileyo Ukudibanisa ngokumangalisayo ukubonelela ngemveliso ngesiphelo esihle.
Su ubukhulu kunye nobukhulu ziqulathwe kakhulu, le yinto iyenza kakhulu kukhululekile ukunxiba. Ingena kuyo nayiphi na ipokotho kwaye inobunzima obuncinci.
Iyavuma ifayile ye- layisha ukuya kwi-10 wattewe, makube njalo iyahambelana nezinto zamva nje Ukuqaliswa kweemarike kuyenza ibe yeyona ibaluleke kakhulu kwintengiso.
Su xabiso yenye into ebalulekileyo. Itshaja ekhawulezayo, eguquguqukayo kunye nenomtsalane ngokomzimba inexabiso elikhulu.
Izinto kunye nokugqiba
Ubunzima bokukhanya kunye nobukhulu
Ukuhambelana ne "top" yamva nje
Ayinaso isinxibelelanisi senethiwekhi yombane. Ngokuqinisekileyo eli linqaku elibi kuba siyakufuna ikhompyuter okanye nawuphi na umthombo we-USB ukuze sikwazi ukuyisebenzisa Akubonakali kusengqiqweni kuthi ukuba itshaja iza kuphela nentambo ye-USB. Inqaku elibi.
Kwakhona, Intambo yohlobo C lwe-USB Oza kwibhokisi yayo kuvela imfutshane kakhulu. Ukuyilayisha kwitafile eqhagamshelwe kwikhompyuter akukho ngxaki. Kodwa ukuba sifuna ukuyihlawulisa kwenye indawo nge-plug kude kancinci iya kuba ngumsebenzi onzima ngentambo emfutshane.
Ayinaso isinxibelelanisi sodonga
Intambo ye-USB imfutshane kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uhlalutyo lwetshaja engenazingcingo yeXiaomi 10W MAX
UGoogle uya kuhlawulisa abavelisi ukuba basebenzise iiapps zabo ze-Android